Nabadgelyo Waalid Qashinkaaga Dubka ku jira darbigaaga? Ma rabtaa inaad ogaatid xalka?
Home > Nidaamyada Hoos-u-Celinta
Dub wax mugdi ah on derbiyada, daaqada ayaa muujinaya iwm oo ka mid ah hantidaada ayaa inta badan lagu qaldo sida calaamad ah ee qoyan soo galaya guriga ka baxsan. Dhab ahaantii, sababta keenta caaryadani waxay u egtahay in ay ka soo baxdo cunto karinta, qubeyska, dharka lagu qalajiyo gudaha iwm. Gaar ahaan, xilliga jiilaalka waxaan haysanaa dariishadayada iyo albaabada si adag u xidhnaa qabowga dibadda, sidaa darteed meco biyoodku ma laha meel ka baxsan oo sidaas daraadeed darbiyada hantidaada oo u muuqda inay ka yaryihiin hawada.
Tani waxay keeni kartaa qaab dhismeed, oo keeni karta dhibaatooyin caafimaad dadka qaba dhibaatooyinka neefsiga sida Neefta.
Si aad uga hortagto, una ilaali diirimaadka guriga adiga oo aan furin dariishadaha, Energetka Happy waxaa lagu rakibi karaa Nidaamka hawo-marinta guriga oo dhan taas oo aan yareynin heerarka qoyaanka ee guriga dhexdiisa laakiin sidoo kale ka saara qaybaha hawada ka baxa iyo yareynaya heerarka caarada qashinka guriga. Guulo dhan wareega.